” ဝူဟန် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသူ ( ၇၀၀ ) ကျော်လာပြီ…. “ – GuGuGarGar
” ဝူဟန် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသူ ( ၇၀၀ ) ကျော်လာပြီ…. “
WK | February 8, 2020 | World News | No Comments
၈. ၂. ၂၀ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၈.၃၀ နာရီအထိ ရရှိသော စာရင်းများအရ နိုင်ငံနှင့် နယ်မြေ ၂၉ ခုတွင် ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရသူပေါင်း (၃၄၈၇၈) ဦး ၌ (၁၇.၅) ရာခိုင်နှုန်းမှာ ရောဂါ အသည်းအသန် ခံစားနေရပြီး ( ၇၂၄ ) ဦးသေဆုံးကာ ( ၂၀၈၅ ) ဦး မှာ ရောဂါသက်သာပျောက် ကင်းသွား​​​ပြီဖြစ်ကြောင်း တရုတ် အာဏာပိုင်များ က ထုတ်ပြန်ကြေညာ သည် ။
၀ူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဖေဖော်ဝါရီလ ( ၇ ) ရက်နေ့ တစ်နေ့တည်း တွင်ပင် လူ (၈၆) ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး လူပေါင်း (၃၃၉၉) ဦး ထပ်မံ ကူးစက်ခံရကြောင်း အဓိကအားဖြင့် တရုတ်တစ်နိုင်ငံ ဟူဘေးပြည်နယ်တွင် ရောဂါကူးစက်မှုနှင့်သေဆုံးမှု များ အဓိက ဖြစ်ပွားနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည် ။
ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသူ (၇၀၀) ကျော်ပြီ
စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်မူ ၀ူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုသည် ၃၃ ဦး အထိရှိလာပြီး တချို့ ကူးစက်ခံရသူများသည် ၀ူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်လူနာများနှင့် ထိတွေ့ခြင်း မရှိသည့်အပြင် ၀ူဟန်သို့လည်း သွားရောက်ခဲ့ခြင်း မရှိသူများဖြစ်၍ ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့ ကူးစက်မှုကို နားမလည်ကြောင်း စင်ကာပူ ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီး ပြောဆိုပြီး ပြည်သူများအတွက် ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို အန္တရာယ်ကြီးသော ကျန်းမာရေး အခြေအနေ လိမ္မော်အဆင့်အဖြစ် သတ်မှတ် ကြေညာလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ကူးစက်ရောဂါများ ဖြစ်ပွားလာပါက ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး အဆင့် ၄ ဆင့် သတ်မှတ်ထားပြီး လိမ္မော်ရောင်သည် အန္တရာယ်ရှိသော နံပါတ် ၃ အဆင့်ဖြစ်ကာ အနီရောင်သည် အမြင့်ဆုံး အဆင့်ဖြစ်သည်။
င်္February 8 , 2020
၈. ၂. ၂၀ ရကျ မွနျမာစံတျောခြိနျ နံနကျ ၈.၃၀ နာရီအထိ ရရှိသောစာရငျးမြားအရ နိုငျငံနှငျ့ နယျမွေ ၂၉ ခုတှငျ ဝူဟနျကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျခံထားရသူပေါငျး (၃၄၈၇၈) ဦး ၌ (၁၇.၅) ရာခိုငျနှုနျးမှာ ရောဂါ အသညျးအသနျ ခံစားနရေပွီး ( ၇၂၄ ) ဦးသဆေုံးကာ ( ၂၀၈၅ ) ဦး မှာ ရောဂါသကျသာပြောကျကငျးသှားပွီဖွဈကွောငျး တရုတျအာဏာပိုငျမြား က ထုတျပွနျကွညော သညျ ။
ဝူဟနျဗိုငျးရပျဈကွောငျ့ ဖဖေျောဝါရီလ ( ၇ ) ရကျနေ့ တဈနတေ့ညျး တှငျပငျ လူ (၈၆) ဦးသဆေုံးခဲ့ပွီး လူပေါငျး (၃၃၉၉) ဦး ထပျမံ ကူးစကျခံရကွောငျး အဓိကအားဖွငျ့ တရုတျတဈနိုငျငံ ဟူဘေးပွညျနယျတှငျ ရောဂါကူးစကျမှုနှငျ့သဆေုံးမှု မြား အဓိက ဖွဈပှားနခွေငျးဖွဈကွောငျး သိရှိရသညျ ။
စငျကာပူနိုငျငံတှငျမူ ဝူဟနျဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျမှုသညျ ၃၃ ဦး အထိရှိလာပွီး တခြို့ ကူးစကျခံရသူမြားသညျ ဝူဟနျဗိုငျးရပျဈလူနာမြားနှငျ့ ထိတှခွေ့ငျး မရှိသညျ့အပွငျ ဝူဟနျသို့လညျး သှားရောကျခဲ့ခွငျး မရှိသူမြားဖွဈ၍ ဗိုငျးရပျဈပြံ့နှံ့ ကူးစကျမှုကို နားမလညျကွောငျး စငျကာပူ ကနျြးမာရေး ဝနျကွီး ပွောဆိုပွီး ပွညျသူမြားအတှကျ ကနျြးမာရေးအခွအေနကေို အန်တရာယျကွီးသော ကနျြးမာရေး အခွအေနေ လိမ်မျောအဆငျ့အဖွဈ သတျမှတျ ကွညောလိုကျခွငျးဖွဈကွောငျး သိရှိရသညျ။
စငျကာပူနိုငျငံတှငျ ကူးစကျရောဂါမြား ဖွဈပှားလာပါက ပွညျသူ့ကနျြးမာရေး အဆငျ့ ၄ ဆငျ့ သတျမှတျထားပွီး လိမ်မျောရောငျသညျ အန်တရာယျရှိသော နံပါတျ ၃ အဆငျ့ဖွဈကာ အနီရောငျသညျ အမွငျ့ဆုံး အဆငျ့ဖွဈသညျ။
THERE ARE FOUR WAYS TO TAKE ON MIESHA TATE’S SUCCESS
ဒုတိယအကြိမ် လူမြင်ကွင်း မှာ ထွက်ပေါ်လာပြန်တဲ့ မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံ အွန်